WBOn Haqa Uummataf Du’uu Malee Uummata Ajjesuuf Kaayyoo hin Qabu |
WBOn Haqa Uummataf Du’uu Malee Uummata Ajjesuuf Kaayyoo hin Qabu
Damee Boruu: Sadaasa 3, 2020
Konoonel Abiyi haliayyaa irraa utaaluuf qophii xumuratee jira. Kan nama gadisiisu warra isa wajjin utaaluuf fiigaa jiru arguu dha. Keessattuu mangudoota Oromoo warra akka Yohanis Lataa(Leencoo) fi Yohaanis Nogoo(Dimaa) umurii isaanii guutuu qasawwan Oromoo fixaa fi ficisiisa turan xiqqatee har’as shira xaxxaa jiraachuun isaanii baayyee nama gadisiisa. Eenyummaa isaanii isaanuu waan ifatti agrsiisaa jiraniif waa’ee isaanii dubbachuun barbaachisaa hin tahu. Maaliif kabajaa fi seena boonsaa uummta guddaa kana isaanii malu dhiitanii seenaa saree fudhatanii akka boola seenuu filatan isaanitu beeka. ABO fi qabsoon bilisummaa Oromoo isaan ukkamsaa turanii fi itti jiran guddatee, dagaagee, fininee golee Oromiyaa mara waliin gahee jira. Dhugaa kana hubatanii utuu uummata isanii wajjin hin dhabbatiin umuriin isaanii dhumaa jira. ABOs tahe qabsoo Uummata Ormoo shira isaanii kan isaan wajjin duloomee tortore miti humni kamuu balleessu hin danda’u. Namni umuriin raagee akaakilee tahe hojii fokkisaa fi yakkamaa tahe hojjechuu irra of qusachuun karaa ture.
Hoogantoonni Amhaaraa fi ilmaan nafxanyootaa bu’aa maal argachuuf akka diraamaa Kononeel Abiyiif dibbee tumaa jiran naaf hin galu. Namichi isaan waajjin tahe Uummata Amhaaraa isaan qabsoofnaaf jedhan wajjin hin jiru. Waan Konoonel Abiyi gochaa jiru dhaa’ima kutaa shan baratuufuu ifaa dha. Warri kun eenyummaa isaa walaalanii jala figaa hin jiran. Jarri kun waan gochaa jiran bareechanii beeku. Akka namichi isaanii tokko jedhe” kan bishaan dura deemu hoomicha. Nutis duuba teenyee waan barbaadinu hojjetachaa jirra” jedhe. Waan hojjetachaa jiran yoo jiraate maqaa Itoophiyaa jedhu jala dhokatanii gara aangoo Impaayeera Itoophiyaa durii sana deebi’uuf carraaquu dha.
Erga gara aangoo dhufee Kononeel Abiyi diraamaa tolshuun tokkofaa yoo tahu midiyaan nafxanyootaa immoo filmii fi dokumentarii isaa qindeessuun beekumtii guddaa argatanii jiru. Diraamaa Kononeel Abiyi hiriira deegarsa isaa irratti akka boombiin darbamu qopheesate. Hoogganna jabaa uummatni jaalattu kana ajjeessuuf jedhee akka uummatni isaa dirmatu goochuuf waan yaadame ture. Waan yaadameef hin taane. Sobaan namoota muraasa irratti dhoksaan murtiin hidhaa bara dheeraa darbee jira. Dhugaan isaanii hin tura malee dhokatee hin hafu. Kan biraa Injiner Simanyew Bekelee ajjeesse waan of ajjeesse fakkeesse bira darbe. Sana booda ajjechaan Dr. Ambaachew Mokonnon namoota isaa wajjin turan waan baayyee garaa nama nyaatu. Duuti Jeneral Asminew Tsigee fi Jeneral Saree Mokonnonis safuu jenne bira dabrre.
Yaroo inni Mootota Habashaa leelisuu argu Uummatani Oromoo fuula isaa Kononeel Abiyi irraa galgalshe. Innis hatattamanan warra nafxanyaa fi hoogantoota naannoo Amhaaraa duuba dhokachuu filate. Uummata Oromoo wajjin garaa fi dhugda tahaa dhufe. Qabsoo Uummata Oromoo akka waggaa kumaaf of duuba deebisu itti dhaadate. Akeekni qabsoo Oromoo of duuba deebisu nafxanyootaaf qumaara siyaasaa Shimalis Abdisaa xaphatee moo’uu utuu hin taane lootoriin tasa isaaniif bahe. Waan qaban hundaan Kononeel Abiyi gargaaruu filatan. Tooftaan isaanii kun yaroof waan isaan gargaaru haa fakkatu malee tasa kan isaan belleessu danda’uu dha. Aangoon Kononeel Abiyi raawwatee jira. Kana booda innis tahe isaan ayyaana mootummaa sana tuhachuu hin qaban. Hunduu wal qabatee gara hallaayyaa deemaa jira. Isa boru tahu seenaan haa himu.
Gara diraamaan jaarraa dhigdamii tokkoffaa yoo deebine ajjeechaa jalaatamaa, bekamaa fi qananii artistii Oromoo Haacaluu Hundeessa agarra. Diraamaa kana kan qopheesse namoota akka Shimalis Abdisaa warra qumaarri siyaasaa harkaa dhumee burjaaja’e jiruun tahun baayye nama gadisisa. Dhiiga ilmaan Oromoon siyaasa isaanii isa qullaa hafee jiru xaphachuuf yaalun dhiifama tokko illee hin qabu. Shimalis Abdisaa afaan bane Shanee fi TPLFtu Haachaaluu ajjeesse jedhee labsaa turuun waan yaadatamu. Sababni inni duraa nutti hin ajjeefne jechuuf. Inni lammaffaa warra jibbuu fi sodaatu Shanee fi TPLF hammeessuf. Amma har’a Uummtni Oromoo xiqqaa fi guddaan Haacaaluu kan ajjeesse Mootummaa Kononeel akka tahe baree jira. Shimalis Abdiisaa waan barbaade haa afuufu.
Ajjjechaa Haacaluu wajjin wal qabatee shira mootummaan qindeesse qabeenyi uummataa barbadeesuu fi lubbuun namoota hedduu akka badu gochuu dha. Kan ajjeefamu, kan hidhamuu fi balaaleefatamuu Uummata Oromoo tahuun baayyee waan namatti ulfaatu. Kononeel Abiyi diraamaa tolcha. Midiyaan nafxanyoota lakkobsa hin qabne filmii barbaadanii dokumantarii maqaa Uummata Oromoo xureessu qindeessu irratti boba’u. Waan isaan hin jennee fi hin goone tokko illee jiru. Uummatni Oromoo nama nyaataa jedhaniiru. Uummatni Oromoo nama qala jedhaniiru. Ummatni Oromoo mana wajjin nama guba jedhanii jiru. Gochii fi jechi isaanii Uummata Oromoo waan godhu hin qabu. Impaayeera Itoophiyaa keessatti eenyutu maali akka hojjechaa jiru har’a biyyi lafaa hin beeka. Galatni ilmaan Oromoo biyya alaa jiraniif haa tahu malee hojiin diploomaasii boonsaan hojjetamee jira. Akka warra Habashaa Midiyaa fi qabeenya ala kanaa guddaa hin qabnu. Haa tahu malee gochi keenya guddaa dha.
Ajjeecha Haacaaluu sababa godhachuudhaan Oromootni kumatama kudhanii ol hidhamanii draramaa jiru. Kan dhiba baayyee lakkawwaman ajjeefamanii jiru. Hooggantoonni ijaarsa Oromoo jumulaani xaxamanii mana hidhaa seeraa fi heera hin qabne galanii jiru. Yoo manni seeraa wabiin haa bahan jedhe poolisiin gadi hin lakkisu. Mallaattoon akka mootummaan hin jirre kan agrsiisu keessa tokko haala kana.
Kan hundaa caala baayyee nama gaddisiisu ijaarosnni Nafxanyootaa fi Amhaaraa utuu manni Amantaa isaanii hin hafiin uummata Oromoo irratti duula adda duraan bananii abaraa fi waraana irratti labsaa jiru. Waan hundaa dura kan beeku qaban Mootummaan Abiyi bara baraan jiraachuu miti har’a iyyuu mootummaan isaa dhumee jira. Ummatni Amhaaraa fi Oromoo garuu bara baraan waliinis tahe olaa jiraachuuf deemnu. Diinumaan uummata jiddutti godhamu eenyuun akka gargaaruu hin beeku. Badii dhuma hin qabne fida malee. Warra maqaa uummata Amhaaraan bu’aa siyaasaa argachuu figaa yirtan maaloo adaba godhadha. Uummata Amhaaraa Impayeera Itoophiyaa keessa faca’ee jiraatu saba fi sblammii wajjin walitti diraa jirtu.
Akka isin Saba Amhaaraaf dantaa tokko illee hin qabne Sabni Amharaa iyyuu hin walaalatu. Yoo haqa dhala namaaf kan dubbattan tahe waa’ee diraamaa Kononeel Abiyi of irraa gataa. Uummata Wallagaa jibbisiisuuf jecha yaroo Konoonel Abiyi durbi Amhaara Universitii Danbi Dollo keessa ukkamamtee bade diraama yaroo kudhan irra deebi’ee kijibamu waa’ee durba bade kanaa irra dedeebiftanii kaasuu keessan agarra. Maaliif bartoota Oromoo ija keessan duratti Universitti Naannoo Amhaaraa keessatti ajjefaman hin kaastan? Maaliif Lubni Ortodoksii Oromoo Afaan Oromoon waan lalabeef ajjeefamu du’a isaa dubbachuu dhiiftan? Maaliif ilmaan Oromoo yoo jumaalan ajjefaman, yoo mana wajjin gubatan, yaroo dubartiin ulfaa ajjeefamtu, yoo abbaa fi haatii wagga a sadetamaa fi torbaatamaa ajjeefaman hin dubanne?
Kan dhumaa fi gidiraa argaa jiru Uummata Oromoo ti. Kan himatuu fi iyyaatu immoo hoogantoota Amhaaraa fi nafxanyoota. Baayyee gowwomaa jirtu. Yoo waan bu’aa isinii qabu tahe jabeessa itti fufaa. Damaqaa Mokonnonii fi Abuuna Maatiyoos ifatti Uummata Amhaaraa hin hidhachiifna jedhenii jiru. Isin warra uummata irrati labsitan (war mongers) tahuu keessan hubadhaa dha. Dhumaatii biyyaa sana keessatti tahuu itti gaaftama duraa kan fudhatu isini. Kan beekuu qabdan gaafa isini uummata Amhaaraa hidhachiiftan; Uummayni Benshangul, Tigrayi, Oromoo, Afaar, Somalee, Gambelaa fi kibaa ciisee akka hin duune dha. Waan meeshaa qabu hundaan of irraa isin ittisa. Kononnel Abiyi isin abdatanii Uummata keenya dorsiisaa jirtan of jiraachuufuu wabii hin qabu. Dhaabbadhaa of ilaala. Waan facaasaa jirtan kana haamachuuf qophaa isiniin jedheen ture yaroo darbe.
Kaleessa immoo diraamaa Kononeel Abiyi haaraa fuutanii afarsuu jalqabdanii jirtu. WBOn uummata ajjeessuuf akeekaa fi kaayyoo hin qabu. Kaayyoon WBO uummata bilisa baasuu dha. Uummata saynii lakka’ee miti kan bilisa baasu. Uummatni afaan barbaade haa dubbatu, sanyii barbaade haa tahu cunqursaa fi saammicha jalaa bilisa bahuu qaba. WBOn uummata Oromoo keessaa dhalatee waan Uummata Oromoo keessatti guddatee Uummata Oromoo keessatti Socho’uuf malee cunqursaa uummata kam irraa iyyu kaasuuf ni qabsa’a. Qabsoon Uummata Oromoo saba fi sablammi jiran maraaf ni gummacha.
WBOn kaleessa naannoo Gulsoo itti namoota Amhaara tahan fixe jira jedhamee midiyaa Habashaan afuufamaa jiru diraamaa Kononeel Abiyi isa haaraa akka tahe hubatamuu qaba. Oduu Mootummaa yaroon isaa raawwate harkaa butanii dubbii dharaa warri afarsaa jirtan nageenya waaran akka hin argamnee danqaa tahaa jirtu. Ammaaf nama dhiba lamaa amma dhiba lammaaf shantamatu ajjeefama jedhu keessa reenfa nama tokkoof dhiiga xiqqoo tokko hin agarre. Si achi filmiin barbaadamee, dokumentariin qophaa’ee dhiyaachuu deema. Amaaf qophii hin qaban. Warri oduu dharaa kana utuu hin qulqulleefatnii afuufaa jiran mootummaa kijibaan fi shiraan lubbuu dheerafachuu barbaadu kan wajjin wal qixa akka itti gaafatmuuf deeman dagachuu hin qaban.
Namni oduu darbarsu sun eenyu? Warra shira kana raawwataa jiru akka hin taane eenyu beeka? Bakka kana waraanatu qubatee ture jedha oduu himaan kun. Akka waraanni keessa baheen shiftoonni dhufanii wal gahii nu waaman jedha. Wali gahii shiftootaa maaliif deemu utuu wal hin bariin? Kan isaan fixxee deeme waraana isaan bira ture yoo tahee eenyu beeka? Waraanni utuu uummatni yaadoo qabuu maaliif yaroo sanatti naannoo Sanaa buqaafatee deema? Shira kana fakkaatu gareen Kononeel Abiyi qineesse WBO maqaa xureessuuf yaaduun kaayyoo isaa ti. Kanafuu dhugaa akka mulatuu fi qaama bilisa taheen qoratamuun abarsa dura barchisaa taha. Garuu Mootummaan Kononeel Abiyi du’a Injineer Simenyew, Dr. Ambaachew, Jeneral ASminew, Jeneral Saree fi artisti Haacaluu qaama bilisa tahen akka qoratamu godhee?
Maqaa WBO kan xurreessu danda’u shira nafxanyoota utuu hin taane hojii isaa qofa. WBO injifannoo bara baraan siif haa tahu! Warri of iyyuu tortoree ajjaa’ee jiru maqaa nama xureessu fi balleessuuf ayyaana hin qabu. Ilmaan Oromoo humna qabdan uummata keessan bilisa baasu dura lubbuu keessan ajjeefamuu jalaa baraaruuf WBO itti makkamuun dirqama. Amma hidhamtanii fi ajjeefamtan teessanii hin eegina. Jiraachuun barusas dursuu qaba. Maaloo booda akka hin gaabine. Kononeel Abiyi nafxanoota wajjin isin fixxuuf shira isaa xumuratee jira.
Gadaan Gadaa Xumuraa Garbummaa TI!
Previous articleHow Eritreans view Abiy and Isaias’ regional integration venture
Next articleNational Defense Forces Given Order to “Start Military Offensive Against TPLF”: PM Abiy Ahmed